Marka aad Finland si rasmi ah ugu soo guurto, waxaa lagaa diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka ee Finland. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga qofka ee Finnishka. Haddii aad doonayso guri degmo, inta badan waa in aad tagtaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Summadda aqoonsiga Finnishka
Sidan ayaad u diiwaangelinaysaa macluumaadka shakhsiga ah iyo cinwaankaada
Cinwaannada dhammaad dadka ajnabiga ah laguma diiwaangelin karo nidaamka macluumaadka dadka. Diiwaangelinta waxaa la samaynayaa oo kaliya, haddii ay buuxsamaan shuruudaha diiwaangelinta.
Ku xisaabtan, in helitaanka aqoonsiga Finnishku aanay si otomaatig ah kaaga diiwaangelinayn sidi in aad tahay degane deegaan cayiman deggan, yacni si toos ah uma heleysid guri degmo. Guri degmo wuxuu noqon kartaa magaalo ama degmo caadi ah. Si aad u isticmaasho adeegyada magaalada ama degmada, waxaad u baahan tahay guri degmo. Adeegyada degmadu waa tusaale ahaan daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo barbaarin-horaadka carruurta.
Aqoonsiga qofku waa 11 calaamadood oo lambaro ah, kuwaas oo ku salaysan maalinta dhalashada iyo jinsiga qofka.
Aqoonsiga qofka waxaad u baahan tahay tusaale ahaan marka aad dano ka qabsanayso saraakiisha, bangiyada ama shaqo-bixiyaha. Aqoonsigaada mid la mid ah cid kale ma haysan karto. Aqoonsiga qofka waxaad heleysaa, marka lagaa diiwaangelinayo nidaamka macluumaadka dadka.
Waad heli kartaa aqoonsiga qofka, haddii aad si sharci ah u joogto Finland. Joogitaanka sharciga ah wuxuu ku salaysnaan karaa tusaale ahaan sharciga deganaanshaha dalka, xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee Midowga Yurub, fiiso ama dal-ku-gal ama nidaamka fiiso la’aanta. Waxaa intaas dheer oo la iska doonayaa in shuruudahan soo socda midkood la biixiyo:
Shaqo, waxbaraasho ama wax u dhigma oo Finland ka dhacaya darteed ayaad u baahan tahay aqoonsiga qofka.
Xubin qoyskaada ka tirsan ayaa cinwaan la diiwaangeliyay ku leh Finland.
Hoggaanka socdaalka ayaa ku siisay sharciga deganaanshaha dalka ama kaarka joogitaanka ama diiwaangelisay xaqaada joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub ee Finland.
Diiwaangelinta iyo aqoonsiga qofka waxaad ka codsan kartaa:
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka
xafiiska canshuurta, haddii aad canshuuritaan dartiis ugu baahan tahay aqoonsiga qofka.
Hogaanka socdaalka ayaa inta badan bixisa aqoonsiga qofka, marka ay go’aan ka gaarayso sharciga deganaanshaha ama xaqa diiwaangelinta muwaadinka Midowga Yurub ama xaqa joogitaanka ee xubinta qoyska muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad aqoonsiga qofka ka heshay Hoggaanka socdaalka ama Maamulka canshuuraha, laakiin aad doonayso in cinwaankaada iyo macluumaadka xiriirka qoyska lagu kaydiyo nidaamka macluumaadka dadka, waa in aad kuwaas diiwaangelitooda ka codsataa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaDVV
Marka aad Finland u soo guuraysoLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVerohallinto
Diiwaangelinta ajaanibta ee xafiiska canshuurahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Marka macluumaadka shakhsiyeed la diiwnaagelinayo ayaa waxaa adiga laguugu keydinayaa cinwaankaada. Cinwaanku wuxuu noqon karaa mid ku meelgaar ah, joogto ah ama cinwaanka boostada oo kaliya.
Cinwaan ku meelgaar ah
Cinwaanka ku meelgaarka ah waa mid si ku meelgaar ah u shaqaynaya, waxaana degane ahaan lagaaga diiwaangeliyay muddo cayiman cinwaanka laga hadlayo. Inta badan cinwaanka ku meelgaarka ah wuxuu markiiba shaqeeyaa hal sano.
Cinwaanka joogtada ah iyo guri degmo
Marka ay Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku kuu diinwaageliso cinwaan joogto ah, waxay degane ahaan kaaga diiwaangelinaysaa illaa iyo wakhti aan la cayimin cinwaankaas. Cinwaanku wuu shaqaynayaa illaa iyo inta aad ka samaynayso wargelinta cinwaan kale. Waxaa islamarkaas laguugu kaydinayaa guri degmo oo Finland ku yaal.
Haddii aad guri degmo ku leedahay Finland, sida caadiga ah waxaad xaq u leedahay in aad isticmaasho adeegyada degmada. Degmooyinku waxay deganayaashooda siiyaan adeegyo badan. Adeegyada degmadu waa tusaale ahaan daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo barbaarin-horaadka carruurta. Waxaa kuu wanaagsan in aad hubsato, in aadiga iyo xubnaha kale ee qoyskaadu aad xaq u leedihiin guri degmo oo Finland ah. Xaq u lahaanshaha guriga degmo ee Finland wuxuu ku salaysanyahay sharciga guri degmo. Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka ayaa ka hubsan kartaa, in aad xaq u leedahay guri degmo oo Finland ah.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Guri degmo ee gudaha Finland.
Haddii laguugu diiwaangeliyo cinwaan boosto, lama diiwaangeliyo in aad cinwaankaas degane ka tahay. Cinwaanka boostada waxaa la isticmaali karaa marka aad haysan cinwaan deegaan oo joogto ah, aad hoteel deggantahay ama aad doonayso in aad boostadaada ka soo qaadato xafiiska boostada.
Haddii aadan haysan summadda aqoonsiga qofka, waa in aad si shakhsi ah u tagtaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Haddii aad haysato summadda aqoonsiga qofka, waxaad haddii aad xafiiska boostada ama internetka ka samayso wargelinta guurista Finland isaga diiwaangelin kartaa cinwaan ku meelgaar ah. Wargelinta guurista waxaad ku ogeysiin kartaa cinwaan oo kaliya.
Haddii aad doonayso in Hay’adda dijitaalka macluumaadka dadku ay diiwaangeliso macluumaadka guurka (tusaale ahaan guurkaada) iyo xiriirkaada qoys, waa in aad soo bandhigtaa caddaymaha rasmiga ah ee arrimahaas.
Haddii aad doonayso in gurigaada degmo lagu kaydiyo nidaamka macluumaadka dadka, inta badan waa in aad si shakhsi ah u tagtaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha qaar marka ay jiraan looma baahna in sidaas la yeelo. Ka hubi bogagga shabakadda Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka in lagaa rabo in aad halkaas tagto.
Ka hor inta aadan xafiiska tegin, wakhti ka qabso bogagga internetka ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Ka hor inta aadan xafiiska imaanin waxaad buuxin kartaa foomka diiwaangelinta ajnabiga, kaas oo laga helo bogagga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Goobta adeegga xittaa waad ku buuxin kartaa.
Marka aad aadayso goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, horay u sii qaado dukumentiyada xaaladda waafaqsan:
baasaboor shaqaynaya ama kaarka aqoonsiga sawirka leh ee rasmiga ah ee muwaadinka Midowga Yurub
kaarka sharciga deganaanshaha ama caddaynti kale ee la helo oo muujinaysa, in aad si sharci ah ku joogto Finland
caddaynta diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka midowga
warbixinta ku saabsan shaqada ama waxbarashada aad Finland ku hayso (tusaale, heshiiska shaqada ama shahaadada waxbarashada)
haddii loo baahdo caddaymaha asalka ah, la sharciyeeyay islamarkaasna la turjumay ee ku saabsan xiriirada qoyska ama dukumentiyada kale ee ay Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadku u baahan tahay, marka ay macluumaadkaada ku qorayso nidaamka macluumaadka dadka.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaDigi- ja väestötietovirasto
Diiwaangelinta ajaanibtaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ku kaydinta maclumaadyada kale nidaamka macluumaadka dadka
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku waxay macluumaadkaada aasaasiga ah ka diiwaangelinaysaa nidaamka macluumaadka dadka ee Finland. Macluumaadyadan waa tusaale ahaan magaca, wakhtiga dhalashada, jinsiga, jinsiyadda, goobta dhalashada, afka hooyo iyo cinwaanka.
Waxaa kale oo diiwaanka lagu qori karaa macluumaadka ku saabsan tusaale ahaan xaaladda guurka, lamaanaha, carruurta iyo waalidka. Haddii aad doonayso in nidaamka macluumaadka dadka Finland laga diiwaangeliyo macluumaadyadan, waa in Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka u geysaa dukumentiyada iyo lifaaqyadooda arrintan la xiriira. Dukumentigu waa inuu noqdaa mid asal ah ama si la aamini karo loo caddeeyay saxnimadiisa iyo haddii loo baahdo in la sharciyeeyo lana turjumo.
Waa in aad Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka u geysaa dukumentiga asalka ama koobiga ah, kaas oo si la aamini karo loo caddeeyay saxnimadiisa. Koobiga waxaa si la aamini u caddayn kara saxnimadiisa hay’adda dukumentiga bixisay ama nootaayada guud ee dalkaas.
Dukumentigu waa in uu noqdaa mid la sharciyeey, si Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku ay macluumaadkaada ugu qorto nidaamka macluumaadka dadka. Haddii uu dalkaada ku biiray heshiiska guud ee Hague, dukumentigaada u codsi caddaynta Apostille.
Uma baahnid caddaynta Apostille, haddii aad haysato dukumentiga guud oo ay bixisay hay’ad ka tirsan waddan Midowga Yurub ah. Si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan tahay in aad dukumentiga guud ku lifaaqdo foomka istaandarka ee loo isticmaalo caawimaad turjumaad ahaan. Foomamkan istaandarka ah waxaad faahfaahintooda weydiin kartaa hay’adda dalka aad caddaynta ka codsanayso. Waxa kale oo la samayn karo, in dukumentiga uu turjumo turjumaan sharci ah oo dal ka tirsan Midowga Yurub uu aqbalay.
Ogsoonow, in dukumentiyadu ay ku qornaadaan af Finnish, Iswiidhish ama Ingiriis. Haddii uu dukumentigaadu ku qoran yahay luqad kale, waa in aad ku dadaashaa, in loo turjumo Finnish, Iswiidhish ama Ingriis. Dukumentiga waxaa turjumi karaa turjubaan qoraal oo rasmi ah. Haddii turjumaadda dibadda lagu sameeyo, waa in turjumaaddaas la soo sharciyeeyo.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan, sida aad dukumentiyada u sharciyayn karto, la xiriir Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaada.